पूजा गर्न जाँदा आफैँ घण्ट हल्लिने दैवीशक्तिको चमत्कार अकलादेवी मन्दिर ! दर्शन गरि सक्दो शेयर गरौँ – PanchKhal Online
Home/रोचक/पूजा गर्न जाँदा आफैँ घण्ट हल्लिने दैवीशक्तिको चमत्कार अकलादेवी मन्दिर ! दर्शन गरि सक्दो शेयर गरौँ
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ किल्चोकस्थित निकै पुरानो धार्मिक स्थल अकलादेवी मन्दिरमा रहेको घण्ट आफैँ हल्लिएको देख्दा यहाँका स्थानीयवासी मात्र होइन मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्न जाने भक्तजन समेत चकित पर्ने गरेका छन् । अकलादेवी खुशी भएका बेला मन्दिरभित्र रहेका घण्ट आफैं हल्लिने र बज्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको बिश्वास रहेको छ। देवी प्रशन्न भएको अवस्थामा रातको समयमा घण्ट बज्ने गरेको तथा यज्ञयज्ञादि, धार्मिक अनुष्ठान र पञ्चबलि दिएका बेला देवी प्रशन्न भएर घण्ट बज्ने र हल्लने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार विसं २०४२ देखि मन्दिरमा शङ्ख र घण्ट बजेको सुनिन थालेको हो। यस्तो हुनुलाई उनीहरु दैवीशक्तिको चमत्कार मान्छन् ।
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिनबहादुर बराई मगरले घण्ट हल्लने कुरा हल्ला नभएर वास्तविकता रहेको बताउंदै आफूले समेत दुई पटकसम्म पञ्चबलि दिएको र त्यो बेला प्रत्यक्ष रुपमा घण्ट हल्लिएको देखेको बताउँछन् । मन्दिरमा नौ वर्षदेखि पूजारीको रुपमा कार्यरत टोपबहादुर सारुले देवीको शक्तिका कारण मन्दिरमा रहेका घण्ट आफैं हल्लिने गरेको बताएका छन्। उहाँका अनुसार मन्दिरमा दैनिक ५०-६० जना भक्तजन पूजाआजाका लागि आउने गरेका छन् । केही दिनअघि मात्रै मन्दिरको अवलोकन लागि पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले विशिष्ट प्रकृतिको यस मन्दिरको प्रचारप्रसार र विकासका लागि स्थानीयवासी सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यस ठाउँलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनाउन सकिने भए पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको भन्दै स्थानीयवासी यस ठाउँको प्रचारप्रसारका लागि जुर्मुराएका छन्। अकलादेवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिनबहादुर बराई मगरले बताएका छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेको मन्दिरको पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । समितिको आन्तरिक कोषको रकमबाट जेठ १८ गतेदेखि मन्दिरको पुनःनिर्माणको काम शुरु गरिएको छ । रु ६३ लाख ५० हजारको लागतमा शुरु भएको पुनःनिर्माणको काम आगामी कात्तिकसम्ममा सम्पन्न हुने निर्माण समितिका संयोजक रामभक्त घिमिरेले जानकारी दिए ।
अकला मन्दिरको बाहिर पुरानो आदिकालदेखिको सिंह र नन्दिनी अर्थात् साढेको स्तम्भ छ । उक्त प्रतिमा निकै पुरानो रहेको अनुमान छ। मन्दिर नजिकै पञ्चबलि दिने स्थान र हवनकुण्ड पनि छ । अकलादेवी मन्दिरको दक्षिण पश्चिममा रुद्रदेवीको मन्दिर छ । अकलादेवी र रुद्रदेवीको महिमा गानका लागि वर्षमा चार वटा रुद्री लगाउने गरीदै आएको छ । यस ठाउँमा हरेक वर्ष वैशाख, साउन, कात्तिक र माघमा रुद्री लगाउने प्रचलन रहिआएको छ ।
मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि भनेर समितिले केही समय अगाडि महायज्ञको आयोजना गरेको थियो । उक्त महायज्ञमा करीब रु एक करोड दान सङ्कलन भएको थियो । मन्दिरको सर्वाङ्गीण विकासका लागि डिपिआरसमेत तयार भइसकेको छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको डिपिआर तयार गरी भजनकीर्तन भवन, पाटीहरु गोलाकार शैलीमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । मन्दिर क्षेत्रमा वनभोज स्थल पनि निर्माण गरिने घिमिरेले बताए। डिपिआर अनुसारका सबै संरचना निर्माणका लागि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक रु १० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।